Palatine गलसुए - lymphoid ऊतक को निर्वाचकगण, अंग oblong गोलो आकार जोडीएको छ र घाँटी को posterolateral सतह मा अवस्थित छ। तपाईं एक वाइड खुला मुख हेर्न भने, तिनीहरूले त पक्षमा देख्न सकिन्छ को uvula।
गलसुए उद्देश्य - शरीर, नाक र घाँटी गर्न प्रवेश द्वार को अभिभाबकहरुको हुन, र बाह्य वातावरण कुनै पनि रोग पैदा एजेन्ट को घुसपैठ रोक्न। प्रतिरक्षा प्रणाली को रक्षा को पहिलो लाइन रूपमा, तिनीहरूले निरन्तर जीवाणुहरु र भाइरस द्वारा आक्रमण उजागर गर्दै छन्, र एक स्वस्थ अवस्थामा एकदम कार्य सामना छ। गलसुए को प्रतिरक्षा को सामान्य गिरावट र संक्रमण संग समारोह गर्न बन्द हुन सक्छ। आफ्नो घुमावदार अंतराल जो जीवाणुहरू को प्रजनन को लागि "पौष्टिक खाद हालन" को रूपमा सेवा purulent caseous प्लग, भरा। त्यसैले पुरानो गलसुआशोथ छ।
रगत र लसीका मा कचरे रोगजनकों, र नशा को स्थिर स्रोत हो। प्रभावित विकास थकान र निराश मुड, अक्सर पुरानो थकान सिंड्रोम को एक राज्य उल्लेख। साथै, विभिन्न अङ्गहरू मा दुखाइ, विशेष गरी जोइन्टहरूमा, एक लामो समय कम ग्रेड ज्वरो राखिएको गर्न सकिन्छ।
वरपरका प्रतिकूल प्रतिक्रिया र भावनात्मक असुविधा मानव दुःखकष्ट गलसुआशोथ गराउँछ जो बलियो दुर्गंध, - रोग को एक धेरै विशेषता सुविधा। घाँटी कुतकुती, निगलने, र केही अवस्थामा, र साँस गाह्रो छ।
जोइन्टहरूमा, हृदय, मृगौला, प्रोस्टेट, ovaries, maxillary sinuses: गलसुए (सबै भन्दा अक्सर coccal प्रकृति) संक्रमण स्थिर स्रोत लक्ष्य अंगहरु मा शरीर र ट्रिगर सुनिंनु भर फैलाउन सक्छ भन्ने रूपमा सेवा गर्छन्।
त्यहाँ एक निष्ठुर सर्कल छ: गलसुए को संक्रमण बारम्बार रोगहरु निम्त्याउँछ जुन शरीर, भर फैलाउन छ। बारी मा, यी रोगहरु थप प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर र गलसुआशोथ थप विकास हुन्छ।
उपचार पुरानो गलसुआशोथ को।
प्रभावित अंग को प्रतिरक्षा स्थिति पुनर्स्थापना - पुरानो एनजाइना को उपचार को №1 उद्देश्य। यो lavage तोकिएको किलकिले लागि antiseptics संग उपचार पछि। को ट्यूब को आत्म-सफाई को लागि प्रक्रियाहरु को एक पाठ्यक्रम कम भएपछि, नशा को लक्षण बिस्तारै मिलेका।
लक्ष्य नम्बर2- सामान्य प्रतिरक्षा पुनर्स्थापना र सुदृढ। यो गर्न, यो प्रक्रिया tempering सिफारिस गरिएका, immunocorrectors नियुक्त।
उद्देश्य №3 - समग्र प्रतिरक्षा स्थिति (स्वस्थ जीवन शैली, आहार, समसामयिक सुधार्नको carious दाँत, उपचार कायम गरेर हासिल छ जो रोग, को पुनरावृत्ति रोक्न पुरानो रोग को)। यो पनि2पटक एक वर्ष गलसुए को निवारक lavage पूरा गर्न, वसन्त र शरद ऋतु मा सिफारिस गरिएको छ।
लुगा धुने र cannula र विरोधी भडकाऊ पछि अल्ट्रासोनिक उपचार को माध्यम ले घाँटी rinsing, साथै inhalation र सिंचाई mucosal घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने समाधान: पुरानो गलसुआशोथ को रूढिवादी उपचार परंपरागत स्थानीय प्रक्रिया नियुक्त भने।
केही मानिसहरू विश्वास पुरानो गलसुआशोथ को उपचार को मात्र प्रभावकारी विधि कि - गलसुए हटाउन। वास्तवमा, तपाईं धेरै अवस्थामा, यो केवल गंभीर जटिलताओं र सम्बन्धित हृदय रोग मा सिफारिस गरिएको छ, सर्जरी बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
पुरानो गलसुआशोथ को गैर-गंभीर प्रकारका संग गलसुए को Lavage स्वतन्त्र गर्न सकिन्छ। तपाईं घरमा प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय भने, तपाईं एक सिरिंज 20.0 र कुनै पनि disinfecting तरल (शुद्ध आवश्यक उसिनेर पानी furatsillina, hlorofillipta, आयोडिन, हर्बल चाय को वाहेक संग), को exacerbation समयमा नै समाधान धेरै पटक एक दिन कुल्ला गर्नु लागि उपयोगी छ। यसलाई कुनै पनि manipulations उपकरण र हात ह्यान्डल गर्न नबिर्स अघि, obschegigienicheskih आवश्यकताहरु सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पुरानो गलसुआशोथ को उपचार को एक धेरै प्रभावकारी विधि - निर्वात लुगा धुने, केवल भीड हटाउन सक्छन् जो, तर पनि pharynx तमाम कपडा सुधार गलसुए। यो प्रक्रिया अल्ट्रासाउंड संग विशेष चिकित्सा केन्द्र मा बाहिर छ।
सामान्य र स्थानीय प्रतिरक्षा बृद्धि गर्न गलसुए, उछाल लिइरहेको भिटामिन पेय र अन्य गतिविधिहरु को नियमित लुगा धुने सर्जरी बिना पुरानो गलसुआशोथ सामना र गलसुए को सुरक्षा कार्य पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। मात्र कुरा के तपाईं को आवश्यक छ कि - सबै सिफारिसहरू को कार्यान्वयन मा स्थिरता र coherence।
Lassara पेस्ट - उत्पादन को सारांश
भँवर: contraindications र सङ्केत गर्छ, प्रयोग
कीव मा 1961 को Kurenivsko शोकमा: इतिहास, वर्णन
Hetero - यो राम्रो वा खराब छ?
घरमा माटो फायर: सुविधाहरू, तापमान र सिफारिसहरू
किन पराई को अन्त्येष्टि को सपना? के अन्त्येष्टि हेर्न सपना?
टेम्प्लेट, मास्टर वर्ग र रोचक विचार: आफ्नो हातमा प्रिस्कूल लागि Lepbuk
Ataman Bulavin Kondraty Afanasievich: जीवनी